Alterian SDL | SM2 bu ihe omuma ihe omuma nke ndi mmadu nke na enye ndi ulo oru ihe ngosi ha na onu ogugu ha ma gosiputa ebe mkparita uka di nkpa, onye na esonye, ​​na ihe ndi ahia chere banyere ha.
Onye guzobere Mark Lancaster na-akọwa ihe kpatara SDL ji bụrụ isi maka mbọ azụmaahịa gị na ụlọ ọrụ gị:
Ngwaọrụ a nwere ọsọ niile nke igwe ihe ọtụtụ ngwaọrụ dị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye, mana ọ na-aga njem ahụ iji wepụta ike ịchọta ọrụ dịka nyocha mmetụta, olu ụbọchị, isi ihe na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaọrụ na-elekwasị anya na mpaghara mpaghara mpaghara, Alterian SM2 zuru oke n'ụlọ na gburugburu ụwa, na-enye ohere nnakọta data na ọtụtụ asụsụ, ntụgharị, na-etinye akụkọ banyere mmetụta, omume igwe mmadụ, netwọkụ mgbasa ozi na ndị ọzọ. Mara na njikwa mpaghara mpaghara, na mpaghara, ọdịnaya dị mkpa bụ isi ihe na-arụ ọrụ dị irè, nke a bụ ihe dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ nwere ọnụnọ zuru ụwa ọnụ.
Key atụmatụ na arụmọrụ nke SDL | SM2:
Mpịakọta kwa ụbọchị - Tụọ ịdị ukwuu nke mkparịta ụka maka ụdị akọwapụtara site na mkpuchi, kọwaa oge oge gụnyere akụkọ ihe mere eme ma debe n'ime mkpuchi nke ụfọdụ ederede ma ọ bụ nkọwa.
Ikeji olu - Mụta ihe isi mmalite na-enwe mmetụta dị ukwuu na mkparịta ụka, nyochaa ụdị ụdị ọdịnaya gafere ọtụtụ ọwa ma tulee oke mkparịta ụka gafee ọtụtụ ụdị iji ghọta ihe na-eme mkparịta ụka ahụ.
Tulee Ubochi - Nyochaa mkparịta ụka mkparịta ụka megide ndị na-asọmpi, chọpụta etu isiokwu si adịkarị oge n'iji ya atụnyere, lelee ntụnyere n'akụkụ, kwalite onyinye ịsọ mpi na akara aka megide ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Gburugburu - Chọpụta okwu ndị a na-atụle maka akara gị, ndị asọmpi ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ghọta mmasị pụrụ iche nke ndị na-ege ntị, hụ na ejiri mkpụrụedemede eme ihe n'ụzọ ziri ezi n'ime ntọala ọchụchọ.
Demographics - Chọpụta saịtị ndị emetụtara, blọọgụ na ndị mmadụ, ngalaba nke ewu ewu, okike na afọ onye edemede.
Ihe edemede edemede - Tụlee mkpado mkpado n'etiti akara gị na ndị asọmpi gị, ghọta isiokwu na ịdị ukwuu nke mkparịta ụka, ma chọpụta mkpụrụ okwu niche maka SEO.
Otutu Map - Ghọta oke mkparịta ụka gafee mpaghara dị iche iche, kewapụ ọnọdụ anụ ahụ nke mkparịta ụka dị iche iche ma gbatuo iji kọwaa ụdị mkparịta ụka ahụ.
Lelee Akụkọ - Mkpesa nke ịmara na otu pịa na-eme ka ị ghara ileghara ozi dị mkpa ma ọ bụ edemede anya, nweta okwu dị mkpa na ezigbo oge na ikike ịmara ọkwa na isiokwu dị ọkụ ma meghachi omume ngwa ngwa.
Akụkọ mmetụta - Nyocha nlebara anya nke onye ahịa ma ọ bụ mmetụta nke mgbasa ozi, ghọta nkesa nkesa maka ika maka oge ụfọdụ ma hazie mmetụta a kapịrị ọnụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara.
Na mpempe, Onye Alterian SM2 na-enye ihe omuma achọrọ iji nyere aka chọpụta ndị na-ege gị ntị, obodo ndị dị mkpa, ndị na-eme ihe ike n'ime ahịa gị, yana ụzọ map nke ụzọ dị iche iche iji soro ha. Ọ na-enye nzaghachi bara uru na nghọta banyere usoro na mmepe ọhụụ kachasị dị mkpa maka akara gị, yana ọtụtụ ozi ntọala nke achọrọ iji dozie usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-aga nke ọma dị ka akụkụ nke atụmatụ ahịa zuru oke.
Tags: mmmmmmmmmmmmmonyinye alterian sdlonyeka alteria sm2sdlsm2elekọta mmadụ mediaọgụgụ isi mgbasa ozionye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Mgbe ịzụrụ Facebook Fans ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na peeji gị dịka o kwesịrị ka saịtị gị ga-abawanye, na-enyere gị aka iji netwọkụ mmekọrịta ọha na eze na-abawanye maka ịba ụba ego. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị mmadụ ugbu a na-eji ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'publicntanet zụọ iji jikọta ndị enyi ha na ezinụlọ ha. Site na ọnụ ọgụgụ dị egwu nke ndị ahịa na-emepe netwọkụ kwa ụbọchị ị nwere ikike na - akparaghị ókè iji chee ụlọ ọrụ gị, ọrụ na ngwongwo ndị ahịa ga - abịa ahịa n ’ụwa niile.
Jul 23, 2012 na 9: 45 AM
Anyị na-eji SDL Alterian SM2 maka ndị ahịa anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2. Ọ bụ ngwa ọrụ kachasị mma maka nyocha gbasara mmekọrịta ọha na ndị ahịa anyị ghọtara uru SM2 bara nke ọma karịa usoro ọ bụla ọzọ amaara ama yana arụ ọrụ n'ọtụtụ asụsụ. Hụ ngwá ọrụ a n'anya!